Soo dejisan MediaMonkey 4.1.29.1910 – Vessoft
WindowsMultimediaTifaftirayaasha warbaahinta,Ciyaartoyda warbaahintaMediaMonkey
Qaybaha: Tifaftirayaasha warbaahinta, Ciyaartoyda warbaahinta
Bogga rasmiga ah: MediaMonkey
MediaMonkey – software si loo maareeyo oo loo abaabulo tiro fara badan oo faylal fara badan. Barnaamijka waxaa ka mid ah ciyaaryahan, ripper CD, maamulaha sare ee maktabada warbaahinta iyo tafaftiraha tag. Muuqaalka ugu muhiimsan ee MediaMonkey waa in la abaabulo faylasha muusigga iyo fiidiyowga ee maktabadda warbaahineed ee ayadoo la adeegsanayo nooca sanadka, sanadka, farshaxanka, qiimeynta, iwm. Software wuxuu leeyahay habab gaar ah oo loogu talagalay dhinacyada u ogolaanaya inay si toos ah u ciyaaraan muusigga aad jeceshahay xisbi MediaMonkey wuxuu kuu ogolaanayaa inaad isku dubbarido ururinta warbaahinta ee u dhexaysa aaladaha mobile iyo kombiyuutarka. Barnaamijka ayaa taageeraya isdhexgalida dukaamada muusikada ee internetka si aad u iibsato alaabooyinka kala duwan ee miidhiyaha. MediaMonkey waxay kaloo leedahay qalab lagu dhexgalo barnaamijyada warbaahinta waxayna u oggolaaneysaa in ay ku xirmaan qaybo dheeraad ah si ay u ballaariyaan shaqeynta.
Maamulaha sare ee maktabadda warbaahinta
Isku qor qalabka gacanta
Raadinta fudud ee metadata
Faallo ku saabsan MediaMonkey
MediaMonkey Xirfadaha la xiriira